ပထမဆုံး အကြိမ် ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားတဲ့ လက်မှုအနုပ ညာလေး ကနေ စစ်ဘေးေ ရှာင်ကလေးေ တွအတွက် အလှူငွေ သိန်း(၆၀)နီးပါး ရရှိခဲ့တဲ့ ချစ်သုဝေ – Shwe Likes
ပထမဆုံး အကြိမ် ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားတဲ့ လက်မှုအနုပ ညာလေး ကနေ စစ်ဘေးေ ရှာင်ကလေးေ တွအတွက် အလှူငွေ သိန်း(၆၀)နီးပါး ရရှိခဲ့တဲ့ ချစ်သုဝေ
ပရိတ် သတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်၊ အဆို တော်၊ ဆရာဝန်မေ လးချစ် သုဝေနဲ့ သူမရဲ့ခင်ပွန်း လ င်းလင်းတို့ ကတော့ လက်ရှိနွေ ဦ်းတော်လှန်ေ ရးမှာ ပြည်သူေ တွနဲ့အတူတူ တစ်သား တည်းရပ်တ ည်နေ တာပဲဖြစ်ပါ တယ်။
လင်းလင်းက သူတတ်ကျွမ်း တဲ့အနု ပညာနဲ့ သီချင်းထု တ်လုပ်ပြီး ထိုသီချင်းက ရရှိတဲ့ငွေသားအကု န်လှူဒါန်းမှာဖြ စ်သလို ချစ်သုေ ဝကလည်း သူမကိုယ် တိုင်ဖန်တီး ထားတဲ့ လက်မှု အနုပညာနဲ့ စစ်ေ ဘးရှောင်ကေ လးတွေအတွက် ရန်ပုံငွေလှူ ဒါန်းသွားမှာပဲဖြ စ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာေ တာ့ ချစ်သုဝေက သူ မဖန်တီးတဲ့ Macrame ကနေ အလှူငွေ သိန်း(၆၀) ရရှိခဲ့ကြောင်းကို “”I weave, you buy, we share, we care” #Trezamacrame ရဲ့ ပထမဆုံး project လေးရဲ့ရလဒ်။ စောင်ရေ ၂၀၀ လောက်မှန်းခဲ့တာ ၁၀၀၀ ကျော် ခုထိလ ည်းဝယ်နြေ ကဆဲပေ မယ့်
၁၁၀၀ နဲ့ပိ တ်ပေမယ့် ငွေလွှဲထပ် ပို့နဲ့ အမှတ်စဉ် 1184 နဲ့ ” ၅၉သိန်း ၂သောင်းကျပ်” လှုခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ မဲ ၁၀၀၀ ကျော်မှာ macrame လေးရနိုင်ဖို့ အခွင့်နည်းေ ပမယ့် လက်မှတ်ဝယ် သူအားလုံးဟာ လှူချ င်လို့သာ ဝယ်ခဲ့ကြတာမို့ ကိုဇေရော ဝယ်ရဲခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေတွေရော တကယ်ေ ကျးဇူးပါ။”
“လိုအပ်တဲ့ေ နရာ၂ ခု ကိုလွှဲလို့ပြီး စြီး ပီးပါပြီ။ အမှတ်တရဖြစ်ဖို့ Treza’s macrame family လို့ရေးလိုက်ပါတယ်။ Macrame လေးတွေကို လစဉ် project လေးတွေနဲ ့လုပ်နေဦးမှာ မို့ stay tune with us !!!! မနက်ဖြန် 14th dec 6:30 pm မှာ treza ရဲ့ macrame ကံထူးသူ ကိုရွေးပြီးေြ ကငြာမယ်နော်..အမှန် တကယ်တော့ အားလုံးဟာကုသို လ်ဆုတွေရပြီး သားပါ macrame လေးကတော့ အပိုဆုသာသာရယ်ပါ🤝🤝🤝” ဆိုပြီး ပြော လာပါတယ်။
ချစ်သုဝေ ကတော့ သူမဖန်တီးတဲ့ လက်မှုအနုပ ညာလေးကနေ အလှူငွေ သိန်းပေါင်းများစွာရရှိ ခဲ့တဲ့အတွက် အလှူရှင်ေ တွအားလုံးကိုကျေးဇူးတ င်ရင်း ပီတိဖြစ်နေရတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Source: Chit Thu Wai ‘s fb
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ သ႐ုပ္ေဆာင္၊ အဆိုေတာ္၊ ဆရာဝန္ေမ လးခ်စ္ သုေဝနဲ႔ သူမရဲ့ခင္ပြန္းလ င္းလင္းတို႔ ကေတာ့ လက္ရွိေႏြ ဦ္းေတာ္လွန္ေ ရးမွာ ျပည္သူေ တြနဲ႔အတူတူ တစ္သား တည္းရပ္တည္ေန တာပဲျဖစ္ပါ တယ္။
လင္းလင္းက သူတတ္ကၽြမ္း တဲ့အႏု ပညာနဲ႔ သီခ်င္းထု တ္လုပ္ၿပီး ထိုသီခ်င္းက ရရွိတဲ့ေငြသားအကု န္လႉဒါန္းမွာၿဖ စ္သလို ခ်စ္သုေ ဝကလည္း သူမကိုယ္ တိုင္ဖန္တီး ထားတဲ့ လက္မႈ အႏုပညာနဲ႔ စစ္ေ ဘးေရွာင္ေက လးေတြအတြက္ ရန္ပုံေငြလႉ ဒါန္းသြားမွာပဲၿဖ စ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔မွာေ တာ့ ခ်စ္သုေဝက သူ မဖန္တီးတဲ့ Macrame ကေန အလႉေငြ သိန္း(၆၀) ရရွိခဲ့ေၾကာင္းကို “”I weave, you buy, we share, we care” #Trezamacrame ရဲ့ ပထမဆုံး project ေလးရဲ့ရလဒ္။ ေစာင္ေရ ၂၀၀ ေလာက္မွန္းခဲ့တာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ခုထိလ ည္းဝယ္ေၿန ကဆဲေပ မယ့္
၁၁၀၀ နဲ႔ပိ တ္ေပမယ့္ ေငြလႊဲထပ္ ပို႔နဲ႔ အမွတ္စဥ္ 1184 နဲ႔ ” ၅၉သိန္း ၂ေသာင္းက်ပ္” လႈခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ မဲ ၁၀၀၀ ေက်ာ္မွာ macrame ေလးရနိုင္ဖို႔ အခြင့္နည္းေ ပမယ့္ လက္မွတ္ဝယ္ သူအားလုံးဟာ လႉခ် င္လို႔သာ ဝယ္ခဲ့ၾကတာမို႔ ကိုေဇေရာ ဝယ္ရဲခဲ့တဲ့ မိတ္ေဆြေတြေရာ တကယ္ေ က်းဇူးပါ။”
“လိုအပ္တဲ့ေ နရာ၂ ခု ကိုလႊဲလို႔ၿပီး ၿစီး ပီးပါၿပီ။ အမွတ္တရျဖစ္ဖို႔ Treza’s macrame family လို႔ေရးလိုက္ပါတယ္။ Macrame ေလးေတြကို လစဥ္ project ေလးေတြနဲ ့လုပ္ေနဦးမွာ မို႔ stay tune with us !!!! မနက္ျဖန္ 14th dec 6:30 pm မွာ treza ရဲ့ macrame ကံထူးသူ ကိုေရြးၿပီးေျ ကျငာမယ္ေနာ္..အမွန္ တကယ္ေတာ့ အားလုံးဟာကုသို လ္ဆုေတြရၿပီး သားပါ macrame ေလးကေတာ့ အပိုဆုသာသာရယ္ပါ🤝🤝🤝” ဆိုၿပီး ေျပာ လာပါတယ္။
ခ်စ္သုေဝ ကေတာ့ သူမဖန္တီးတဲ့ လက္မႈအႏုပ ညာေလးကေန အလႉေငြ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာရရွိ ခဲ့တဲ့အတြက္ အလႉရွင္ေ တြအားလုံးကိုေက်းဇူးတ င္ရင္း ပီတိျဖစ္ေနရတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Source: Chit Thu Wai ‘s fb
သူမကို ချစ်သေးရဲ့လား ဆိုပြီး ပရိတ်သတ်တွေကို မေးခွန်းထုတ်လာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဝတ်မှုံရွှေရည်
သူ့ ပိုင် ဆိုင်ထားတဲ့ ပတ္တပြားကြီး ကို ထုတ်ကြွားလာတဲ့ လူကြမ်းသရုပ်ေ ဆာင်နိုင်လူ